Vondron’ny mpanohitra : « afa-po izahay rehefa misokatra ny Kianjan’ny demokrasia » (+vidéo)
Tsy eken’ny vondron’ny mpanohitra ny hampiatonana ny fampiasana na hamindrana toerana ny Kianjan’ny demokrasia. Nanomboka tamin’ny 2009, araka ny fanazavana, dia manan-danja ny Kianjan’Ambohijatovo noho ny anarana nomena azy. Tsy azon’ny « front des opposants » ekena arak’izany ny fametrahana demokrasia amin’ny endriny metimety amin’i tgv satria fanaovana fitaovana ny vahaoaka fotsiny izany.
Mikasika ny fampiasana io Kianja io indrindra dia nampitain’ireo mpandrindra fa nahazo fanasana avy amin’ireo tomponandraikitry ny tanànan’Antananarivo izy ireo mba handray anjara amin’ny fivoriana izay iarahan’ireo rehetra maniry hampiasa ny Kianjan’ny demokrasia sy ireo tomponanandrikitra voalaza etsy ambony. Araka ny fanazavan’i Lalatiana Ravololomanana moa dia dingana ihany ny tolona mikasika ny fahazahoana io kianjan’ny demokrasia io, « tanjona kosa ny ahafahan’ny rehetra miara-midinika ny hanganana Firenena vanona tsy andairan’ny krizy politika intsony ». Nomarihin’ny vondron’ny mpanohitra ihany koa fa tsy mifanipaka velively amin’ireo hetsika hafa ny asan’ny « front des opposants » rahatoa ka ny fikatsahana ny fahalalahana sy ny fampanjakana ny demokrasisa no tanjona.
Praiministra Beriziky : « tsy manome tsiny ny ankolafy Ravalomanana nisintaka aho »
Nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ny praiministra lehiben’ny governemanta androany. Nanokanana fotoana manokana ny mpanao gazety ahafahana manadihady mikasika ny raharaham-pirenena. Niaiky ny praiministra fa tafalatsaka tanteraka anatin’ny kizo Gasikara ankehitro. Resy lahatra izy fa ny fifidianana ihany no hany làlana tokana ivoahana amin’izany.
Saingy misy lafy maro tsy maintsy arahina ahazaona fifidianana eken’ny rehetra ary mangaraharaha. Isan’ny fepetra amin’izany ny fametrahana ny fitoniana mialoha ny fifidianana.
Raha mikasika ny fahalalahana miteny ohatra dia nanambara ny praiministra fa zo fototra ny vahoaka izany saingy misy fetrany ihany izany. Tsy maintsy andraisana fepetra ireo mihoa-pefy. Efa nisy ihany koa anefa ny fifanarahana amin’ny mpitandro ny filaminana ny amin’ny hamerana ny fampiasan-kery raha tsy misy ny fandrobana sy ny fanakorontanana.
Isan’ny noresahiny ihany koa ny mahakasika ny fisintahan’ny ankolafy Ravalomanana ao amin’ny fiaraha-mitantana. « Tsy azo omen-tsiny izy ireo taorian’ny zavatra nahazo azy teny Ambohijatovo ». Saingy niantso azy ireo kosa ny lehiben’ny governemanta hiverina amin’ny fiarahana mitantana, satria ilaina ny fisiany ao amin’ny fampandehan-draharaha amin’ny departemanta isan’isany.
Araho manontolo ny valan-dresaka nataon'ny praiministra Omer Beriziky :
Tondro zotra : harodana mba tsy hiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA
Miala any sahady ny teti-dratsy ho entin’ny FATE mandrodana ny tondro zotra. Ny tena tanjona dia ny hanakana amin’ny fomba rehetra ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA. Raha ny fizotran’ny fanatanterahana ny tondro zotra mantsy dia mirona mankany amin’izany ny toe-javatra ankehitriny. Ny Ankolafy RAVALOMANANA rahateo dia efa sahy milaza fa alohan’ny faran’ny volana Mey no ho tafaverina an-tanindrazana ny Filoha. Manginy fotsiny ny hetsika etsy sy eroa izay tsy maha-marin-toerana ny mpanongam-panjakana velively. Mihorohoro noho izany ary tgv sy ny namany ka dia efa nandrafitra sahady endrika teteazmita izay tsara ivelany fa mifono poizina ny ao anatiny.
Anjaran’ny Malagasy rehetra no mandinika eo am-pamakiana ireto antotan-taratasy izay atolotra antsika ireto. Ny azo ambara dia fitondrana miaramila amin’ny endriny hafahafa izy ity ary ny hampangina ny fitakiana etsy sy eroa sy ny hanakanana ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA no tena ifantohan’ny paikadin’ny FATE nandrafitra ity tetezamita vaovao ity.
Toy izao ny firafitr'ilay tetezamita vaovao :
Nouvelle_Transition_FATE.doc 1.51 Mo
Tapenam-bava « vonjy maika » ny demokrasia (+vidéos)
Miendrika fandrirarirana sy famitahana ny mpiray tanindrazana tsotra izao ny fanapahan-kevitra izay noraisin’ny mpanolon-tsaina ny tanànan’Antananarivo mikasika ny Kianjan’ny demokrasia. Tapaka nandritra ny fivoriana aram-potoana nataon’ireto olom-boafidy ireto mantsy fa dia haato mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fampiasana ny Kianjan’ny demokrasia eny Ambohijatovo ary hitady toerana afaka hasolo izany ny kaomina. Raha ny fanazavan’ny « préfet de Police » eto an-drenivohitra dia nanaraka ny làlana velona ny fomba nandaniana io fanapahan-kevitra io.
Ho an’ny vondron’ny mpanohitra kosa dia any amin’ny kaomina izany ny baolina. Tsy nanaja izay nifampiresahana ihany anefa ny CUA raha ny fahitan’izy ireo azy satria dia efa nanambara ny filohan’ny filan-kevitry ny tanàna fa « tsy manana eritreritra hanakatona » izany toerana izany.
Nanapa-kevitra ny hihaona avy hatrany amin’ny filohan’ny mpanolo-tsaina ny tanàna ny « front des opposants » saingy niala maina. Tsy nisy tomponandraikitra afaka nandray azy ireo tao amin’ny lapan’ny tanàna raha ny fanazavana. Ny andro anefa vao amin’ny 11 ora atoandro. Nanambara ary ny vondron’ny mpanohitra fa tsy hamelan’izy ireo raha tsy mazava ny resaka mikasika ity Kianja ity satria raha tsy mbola malalaka ny fampiasana an’io dia mirona mankany amin’ny fifandonana lalandava ny fanehoan-kevitra rehetra eto an-drenivohitra
Vondron’ny mpanohitra : tsy manaiky ny hamindrana ny Kianjan’ny Demokrasia (+vidéo)
Mazava ny hevitry ny vondron’ny mpanohitra taorian’ny fifampiresahana nataon’izy ireo tamin’ny mpanolo-tsaina ny tanànan’Antananrivo renivohitra. Roa ihany ny lalana hamahana ny olana eto amin’ny Firenena : na miverina mifampiresaka na mizotra mankany amin’ny fifandonana ka hanaovana sorona indray ny vahoaka tsy mandady harona. Mandeha manko ny resaka fa hafindra eny Andohatapenaka ny Kianjan’ny Demokrasia araka ny fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ny tanàna.
Amin’ny vondron’ny mpanohitra dia fanaovana zinona ny Malagasy izany ary fanilihana ireo rehetra te-haneho hevitra mba tsy ho tazan’ny mason’ny mpiray tanindrazana. Namafisin’izy ireo anefa fa tsy vahaolana intsony ny mbola hifandrirotra sy hifamono eto fa tsy maintsy miaiky i tgv fa tsy nahomby ny nitondrany ny Firenena tao anatin’ny telo taona ka ilaina ny fandrafetana miaraka fototra vaovao ho an’ny fahafahana sy ny tetezamita iarahana.
Ankolafy Zafy Albert : tsy hiray tsikombakomba amin’ny mpamita-bahoaka (+vidéos)
Namafisin’ny Ankolafy Zafy Albert androany fa tsy mbola nanolotra olona hiditra ao anatin’ny fitantanana ny tetezamita ity Ankolafy ity na dia maro aza ireo mitonona fa nivoaka avy ao. Ny olana rehetra manjo ireo antokon’olona ireo dia mifandray tanteraka amin’i tgv sy Beriziky izay nanendry azy fa tsy misy idiran’ny Pr. Zafy Albert velively. Raha ny fanazavana mantsy dia niova tanteraka ny lisitra izay nalefan’ny Profesora tany amin’ny praiministra tamin’ny fandrefetana ny governemanta ary melohin’ny Ankolafy izany fihetsika izany.
Ankotra izany dia nambaran’ny Pr. Miandrisoa Jean Marcel izay lehiben’ny delegasiona eo amin’ity Ankolafy ity fa tsy azon’izy ireo ekena ny fampitomboana mihoa-papana ny isan’ny ministra sy ny parlemantera satria toa fanadaniam-bola fotsiny ihany izany sady famitahana ny vahoaka Malagasy. Isan’ny teboka notakian’izy ireo tamin’ny SADC rahateo ny hamerenana ny fandrafetana ny andrim-pitondrana mba tena ho tsy mitanila tokoa. Raha ny tokony ho izy hoy Miandrisoa Jean Marcel dia 50% ny anajaran’ny mpanohitra ary 50% no misolotena ny mpomba ny mpitondra any antin’ny andrim-pitondana tsirairay saingy tsy notanterahina izany ka notsoriny fa « tsy hiditra ao anaty fitondrana » izy ireo.
« Tsy misy ankoatra ny miverina mifampiresaka no vahaolana » hoy ny lehiben‘ny delegasiona Ankolafy Zafy Albert. Nomarihiny fa efa nifampiresaka tamin’ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara izy ireo mikasika ny ahafahana manatanteraka izany. Tokony hanaiky ny hametrahana izany anefa ny rehetra satria, toy ny tondro zotra, dia tsy ny fifanarahana hivoaka amin’ny dinika no olana fa ny finiavana hanatanteraka azy.
Vondron’ny mpanohitra : « Avereno amin’ny vahoaka ny Kianjan’ny demokrasia » (+vidéos)
Nihaona tamin’ny filohan’ny delegasiona manokana eto Antananarivo renivohitra ny vondron’ny mpanohitra androany. Mikasika indrindra ny fitantanana ny kianjan’Ambohijatovo no tena fototry ny dinika izay naharitra ora iray mahery. Amin’ireto hery veloan ireto mantsy dia tokony hajaina ny tolona izay nandatsahan’ny mpiray tanindrazana ny ràny ho an’izany fahalalahana maneho hevitra izany. Efapolo taona taty aorian’ny 13 Mey 1972 rahateo dia mbola mipetraka hatrany ny fanontaniana hoe « aiza ho aiza ny demokrasia ».
Fanazavan'ny talen'ny kabinetra CUA :
Hapetraka eo amin’ny olom-boafidy
Araka ny fanpahan-kevitry ny tomponandraikitry ny tanàna dia hapetraka eo amin’ny mpanolotsaina ny tanàna ny fanapahana mikasika ity kianja ity. Ho fanomanana izany ary dia hihaona amin’ny birao maharitra eo amin’ny filan-kevitry ny tanàna ny vondron’ny mpanohitra rahampitso tolakandro ary hametraka ady hevitra matotra mikasika ity Kianjan’ny demokrasia ity.
Ankolafy RAVALOMANANA : miantso ny mpitandro filaminana hanao ny asany (+vidéo)
Tsy hihemotra amin’ny tatitra tokony hataony amin’ny vahoaka ny parlemantera avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA. Manome fotoana ny vahoaka izy ireo rahampitso 12 May 2012 eny amin’ny Kianjan’Ambohijatovo fa tsy maintsy tanteraka io fanaovana tatitra io. « Asan’ny parlemantera izany » araka ny fanazavan’ny Me. Hanitra Razafimanantsoa « ka tsy azo sakanana ». Miantso ny mpitando filaminana izy ireo mba handray ny andraikitra manandrify azy fa tsy hanakorotana ny hetsika hataon’ny Ankolafy miaraka amin’ny vahoaka.
Ny miaro ny vahoaka sy ny fananany no efa nanaovan’izy ireo fianianana ka tokony hajainy hatramin’ny farany. Fanampin’izany dia olom-panjakana koa ireo hanao tatitra amin’ny vahoaka ireo ka tsy mila ny fanomezan-dalana avy amin’izay milaza fa mpitondra fanjakana. Efa nisy rahateo ny taratasy nalefa tany amin’ireo mpiandraikitra ny tanànan’Antananarivo ho fampahafantarana izany hetsika hanaovana tatitra amin’ny vahoaka izany. Nomarihin’ny Me. Hanitra moa fa « manomboka hita porofo ny finiavan’ny sasany tsy hanatanteraka ny tondro zotra » ka izay no maha-maika ny tokony hampahafantarana ny marina amin’ny mpiray tanindrazana rehetra.
13 May 1972 – 13 May 2012 : mandray anjara ho an’ny 40 taona manaraka ny MFM (+vidéo)
Nomarihin’ny antoko MFM tamin’ny valan-dresaka ny fankalazana ny faha-40 taonan’ny hetsi-bahoaka tamin’ny 1972. Anjara-biriky ho fanairana ny vahoaka amin’izao zava-manjo ny Firenena izao ny fahitan’izy ireo izany. Fijery mitodika ny lasa ahafahana hanorina tontolo vaovao no toe-panahy nitondran’ity antoko ity izao fahatsiarovana izao. Mifanao amam-bolana rahateo ny 13 May sy ny fitsanganan’ny antoko MFM noho izany dia misy ifamatorany ny tranga roa. Ity valan-dresaka ity dia nahafahan’ny antoko nampita ny tolona niainan’ny Malagasy tao anatin’ny fitakiana ny fahafahana sy fanehoana firaisan-kina. Raha ny fahitan’ny antoko MFM dia ilaina izany firaisan-kina izany amin’izao fikarohana ny vahaolana ho an’ny Firenena izao.
Mouvance Ravalomanana : leur absence dérange
Quel serait le sort réservé aux 5 ministres de la mouvance Ravalomanana, qui ont désertés les conseils? Selon le communiqué du gouvernement, le premier ministre enverra un rappel à l'ordre à l'endroit de Pierrot Botozaza, Rolland Ravatomanga, Olga Ramalason, Ruffine Tsiranana et Ihanta Randriamandranto, pour leur absentéisme.
C'est le vice premier ministre en charge du développement et de l'aménagement du territoire qui a sollicité un débat ouvert «sur cette absence » et a appelé ainsi la prise de décision ferme. Selon ce communiqué « le comportement de ces ministres, que les rapporteurs appellent de ministres défaillants, constituent une obstruction du processus de Transition ».
Finalement, cette absence dérange-t-elle autant? Et en quoi cette absence représente-t-elle « une inobservation de conduite et patriotique pour faire avancer la Transition », questionne un membre de la mouvance Ravalomanana. Et ce leader de rappeler que « la décision de suspendre leur participation au sein de la transition découle du non respect des articles 16, 17, 18, 20 de la feuille de route. La répression d' Ambohijatovo est une preuve tangible ». Ces ministres ont en effet déposé une note verbale, sollicitant la mise en oeuvre de la feuille de route dans son intégralité. « Alors brandir les articles 22 et 23 en pareille circonstance serait ignorer les récents agissements envers la mouvance » défend ce leader.
Et même si le 24 avril, comme le rappelle le présent communiqué les ministres ont adopté ensemble une résolution claire que « le Gouvernement de Transition d’Union Nationale affirme sa volonté de continuer la mise en œuvre de la Feuille de Route, dans son intégralité, le respect des textes en vigueur et la perspective de la mise en place d’un climat d’apaisement politique et social », leur non participation aux conseils suivants ne constitue en aucun cas « une violation de cet accord » comme le présume le vice premier ministre Hajo Andrianainarivelo, puisque « une partie de la feuille de route en elle même a été violée, après que des dirigeants de la transition de cette mouvance en occurrence, le président du Ct, les ministres, les parlementaires aient été victimes des lacrymogènes ».